GreenWorks 25022 Review Electric Lawn jaro - Rule News
GreenWorks 25022 Review Electric Lawn jaro
Greenworks 25022 waa jaro ugu wanaagsan ee cawska sida ay lacagta si fiican marka la eego waxqabadka iyo miday. jaro user cawska saaxiibtinimo ayaa la qalo karaa si sahal kugu dhawri doonaa cagaarka aad ee xaaladaha caafimaad waqtiga oo dhan.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo lawn suuqa. lawn waxaa laga heli karaa in safafka qiimaha kala duwan. Waa in aad maraan qaababka si aad u dooran doonaa wax soo saarka ugu fiican u buuxiya shuruudaha aad.
Haddii aad soo martay daydo kala duwan oo aan lagu guuleeysan in la helo mid ka mid ah, waa in aad maraan eegista si aad u fahmi doonaa oo ku saabsan Greenworks 25022.
Waxaa laga yaabaa inaad u xaliyo dhidibkii halkan aan libiqsanayn kasta.
width The goynta of gowsa (model tirada 25022) waa 20 inches. Waxaa lagu rakibay 12 amp motor. Waxaa jira saddex doorasho oo kala duwan goynta la Greenworks 25022.
Waxay kale oo ay ku walaaqaya, kooxda dheecaan iyo ururinta bacda gadaal. Waxaad isticmaali kartaa gowsa ah si ay u dhinto cawska meelaha laga bilaabo 1.5 inches in 3.75 inches.
Miisaanka of unit yahay 59 pounds. Iyadoo shirkii yar diyaar u ah inay u isticmaalaan unit aad u noqon doonaa. Waa in aad ku soo lifaaq bac cawska si unit oo aad diyaar u ah inay u guuraan jaro si ay u qabtaan shaqada waa.
Sida lagu sharraxaa waa 20 ", waxaad awoodi doontaa inaad si ay u ururiyaan qadar hufan ee cawska laga gudbi kasta noqon doonaa.
The lawn mower is fitted with high quality materials. It is true that you will find lots of competitors in the same price range. sidaa, they will not be able to compete with Greenworks 25022 in terms of competitiveness.
Waxaad qaadi kartaa ku walaaqaya iyo dheecaan dhinac iyo bac gadaal xaqiiqada ah kor loogu qaado doonaa waxqabadka beergooyuhu. By isticmaalaya kabaalka, waxaa suurtagal ah si ay ula qabsadaan height of mishiinka.
Waxaad qabsato karaa 1.5 inches in 3.75 inches. Waxaad ku hardiyi kartaa qaybta aad si fudud sidii loo rakibay giraangiraha badan oo size 10 ".
Qaabka wheel wuxuu ku siinayaa dabacsanaan si ay u gaaraan darbiyada iyo wadiiqooyinka oodaha aan dhib.
Iyada oo xamili laabanto cusub, ma jiri doono culaab on boos kaydinta.
Waxaad ku haboon waxaa lagu keydin karaa in garaashka ama cariishka. Waxaad ka faaiidaysan karaan awood weyn goynta, waa iyada oo loo marayo Greenworks 25022.
cawska The in si wanaagsan loo ilaaliyo doonaa iyadoo la isticmaalayo xoog ku walaaqaya ee gowsa ah. Waxaad noqon doontaa mid aad u badan ku qanacsan awoodda ururinta cawska. cawska ayaa la soo ururiyay doonaa bacda si effortless.
• Yimaado qalab raagaya
• design xarrago
• giraangiraha adag iyo gacanka
• 3-in-1 xarunta hawl-
• awood goynta Great
• awood ku walaaqaya Great
• dhaqaajinta xoojiyay
• No is riixay
• in aan la isticmaali karaa yards badan
• Waa in ay awoodaan in ay maareeyaan xudunta
Greenworks 25022 waa jaro ugu wanaagsan ee cawska sida ay lacagta si fiican marka la eego waxqabadka iyo miday.
jaro user cawska saaxiibtinimo ayaa la qalo karaa si sahal kugu dhawri doonaa cagaarka aad ee xaaladaha caafimaad waqtiga oo dhan.
CLICK HERE TO CHECKOUT GreenWorks 25022 Electric Lawn jaro
Waxaad kaloo booqan kartaa Best Safeeynta Garden adeegyada London. Si aad u samayso beertaada u muuqataa nidaamsan.
dhagax xiddig Great, Greenworks, inji, Lawn, Lawn mower, Mower, Mulch, Product (ganacsi)
← Seynisyahanno koraan unugyada maskaxda aadanaha ka unugyada asliga ah Earthwise TC70001 Electric Tiller Cultivator Review →